को राष्ट्रवादी ? नक्कली नागरिकता बाँड्ने यि नेताहरु कि भारतीयसँग लड्ने देवनारायण र तिलाठीवासी ? « Dhankuta Khabar
समय : 2:28 AM
काठमाडौ । २०६२-०६३ सालको आन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ५६१ सदस्यीय टोली बनाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण गर्यो । सामान्य सर्जिवनको आधारमा नागरिकता वितरण गरिंदा लाखौं गैरनागरिकले नागरिकता पाएको स्पष्ट छ । नक्कली नगरिकता बाड्नेहरु कसरी राष्ट्रवादी ? नागरिकता वितरणका लागि मधेश केन्द्रीत दलहरुले दबाब दिएका थिए । तर, दाता कोही मधेशी थिएनन् ।
काठमाडौंमा राजेन्द्र महतोहरुको अनुहार मन नपराउनेहरुले सबै मधेशीलाई उस्तै देख्छन् । राजेन्द्र महतो मधेशका नेता हुन् तर मधेशको आम मनोविज्ञान होइनन् । हाम्रो सीमा सशस्त्र प्रहरीले रक्षा गरेको छैन । सीमावर्ती जनताले गरेका छन् । मधेशको राजनीति गर्ने र देशभक्तिको कुरा गर्ने जमातभन्दा विशाल राष्ट्रवाद बोकेका सीमामा तैनाथ मधेशीका कारण देश जोगिएको छ ।-नेपाल आजबाट